डायस्पोरा नै किन?
मानिसहरु आफु जन्मिएको ठाउँबाट अन्य ठाउँमा सर्ने कारणहरु थुप्रै हुन्छन् । बसेको त्यस्तो ठाउँ प्राकृतिक कारणले बसोबासकोलागी उचित नभएकोले या राजनैतिक कारणले या जीवन सुखमय बनाउने माध्यमहरु खोजीको कारणले लगायत जे कारणपनि हुन सक्छन् । तर कारण जे भएपनि मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सर्ने चाहि मानवको सभ्यता शुरु भएकै समयदेखि हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यस्तो सराईको टुँगो मानिसले जहाँ आफ्नो सुरक्षा अनुभव गर्छ, जहाँ आफुले सफलता प्राप्त गर्ने अनुभव गर्छ त्यहाँ हुन्छ । यसरी अन्य मुलुकका झैँ नेपालीहरुपनि विभिन्न कारणले देश छोडेर बाहिरिएका छन् । कोहि सीमापारीको देशमा त कोहि बर्मा त कोहि अमेरिका, अष्ट्र्ेलिया या बेलायत या खाडी मुलुक होस् या मलेशिया, हँगकँग या अन्य देशहरुमा छरिएका छन् । र यो क्रम बढ्दो छ । खाडी मुलुक, कोरिया र मलेशियामा विशुद्ध रोजगारीको कारणले गएका हुनाले तिनिहरुको फिर्ति अवश्यम्भावी छ । तर अमेरिका, बेलायत, अष्ट्र्ेलिया या क्यानाडा जानेहरुको भने फर्कने नफर्कने कुनै टुँगो हुँदैन । किनभने प्रायशः तिनिहरुको मनस्थिति उतै बस्ने हुन्छ । साह्रै कम सँख्यामात्र फर्कने गरिएको पाईएको छ । अनि यसरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको चर्चा चल्दा डायस्पोरा भन्ने शब्द अत्यधिक प्रयोग गरिएको पाईन्छ । तर डायस्पोरा के हो, यसको सीमा र लक्षण के हुन्, कस्तो व्यक्ति या साहित्य डायस्पोरा हुन्छ भन्ने विषयमा भने तर्कसँगत र सर्वमान्य मत पाईएको छैन । अझ भन्ने हो भने कतिले त कुरै नबुझी देश बाहिरको भन्ने वित्तिकै डायस्पोराको शब्दमाला लगाई दिई हाल्छन् । त्यसकारण यस शब्दको दुरुपयोग त भईरहेको छैन भन्नेतिर हामीले सोच्नु जरुरी छ । डायस्पोरा शब्दको उत्पत्ति र कारण जे जस्तो भएपनि यदि यो शब्द हामीले प्रयोग गर्ने हो भने यसलाई अब हामी सुहाउँदो र अहिलेको समय सुहाउँदो हुनेगरी प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । ईसापूर्वको छैठौँ शताब्दिमा प्रयोग गरिएको यो शब्दलाई अहिलेको समय सुहाउँदो गरि परिभाषित गरिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाई छ । अर्थात त्यतिखेर विस्थापित यहुदीहरुकोलागी प्रयोग गरिएको शब्द अहिलेपनि त्यसै सन्दर्भमा प्रयोग गरिनुहुन्न । केहि सिमित विव्दानहरुले डायस्पोरा सम्बन्धि लेख लेख्ने या कार्यपत्र पेश गर्ने काम गरेपनि यसले सबैको चित्त बुझाउन नसकेको भान हुन्छ । किनभने यि विव्दानहरुका अनुसार डायस्पोरा भन्ने शब्दले मूलतः अमेरिका, बेलायत, हँगकँग या क्यानाडाहरुमा गएर बसोबास गर्नेहरुलाईमात्र लक्षित गरेको पाईन्छ । छिमेकी मुलुक भारत लगायत बर्मा आदि देशकालाई के भन्ने प्रष्ट छैन । फेरी ति नेपालीहरु त्यस देशमा कति बस्नुपर्छ भन्ने कुनै निर्क्यौल गरेको छैन । कस्तो रचनालाई डायस्पोरिक भन्नेपनि प्रष्ट छैन । सामान्यतयाः गैर आवासियहरुको सँगठनकै परिभाषालाई आत्मसात गरेर डायस्पोराको परिभाषा दिन खोजिएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
डायस्पोरा शब्द विशेष गरी विदेशमा साहित्य साधनामा लागेकाहरुप्रति प्रयोग भएको पाइएको छ । तर विदेशमा बसेर साहित्य साधना गर्नेहरुकोलागी यो शब्द नै प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने कुनै बलियो तर्कपनि छैन । डायस्पोराको सट्टा अन्य कुनै शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर वास्तवमा गहिरिएर भन्ने हो भने यो डायस्पोरा र ननडायस्पोराको सीमा रेखा नै कोर्नु बेकार छ । स्वदेशमा होस् या विदेशमा होस् नेपाली साहित्यको सेवामा लागेको छ भने उसले गरेको कामको मूल्याँकन गर्ने हो न कि उसलाई कुनै आलँकारिक शब्द सीमा प्रयोग गरेर मूल समूहबाट विच्छेद गर्ने या भिन्नता देखाउनु हो भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । जहाँ बसेर रचना गरिएपनि ति रचनालाई मूलधारमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क रहेको छ ।
ल भैगो, विदेशमा बसेर साहित्य साधनामा लागेकाहरुलाई मूलधारबाट अलग गराउने उदेश्यले यो शब्दको प्रयोग गर्ने हो भनेपनि यसको परिभाषा, लक्षण, सीमा आदि स्पष्टसँग तोकिनुपर्छ । अन्यथा गलत परिभाषाको नजीर बस्यो भने यसलाई सच्याउन गाहारो पर्ने हुनसक्छ । उदाहरणकोलागी भारतमा बस्ने नेपालीहरुलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने? बर्माका नेपालीहरुलाई के भन्ने? कति समय कस्तो देशमा बस्यो भने उ डायस्पोरिक हुन्छ ? उसले रचना गरेका साहित्यमा के कस्तो लक्षण हुनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । अनिमात्र यस शब्दको प्रयोग सार्थक हुन्छ ।
तर अहिले त एकदम हलुकोसँग विदेशमा बसेर रचना गरिएका साहित्यलाई डायस्पोराको नामले सम्बोधन गरिन्छ । मलाई एउटा घटनाको सम्झना भयो र प्रसँगबश उल्लेख गर्न चाहन्छु । अमेरिकाबाट नेपाल पुगेका एक साहित्यकार मित्र नेपालको कुनै एक साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेछन् । त्यस कार्यक्रममा विदेशमा बसेर साहित्य साधना गर्नेहरुको चर्चा चल्दा एक स्थापित साहित्यकारले त्यसप्रति आपत्ति जनाएर यस्तो साहित्य हजार डलरको डायस्पोरिक साहित्य हो भनेर विरोध र आलोचनाको स्वरमा बोलेछन् । सो कुरा ति मित्रबाट मैले फोनमा थाहा पाएँ । यो कुराले मलाई के सोच्न बाध्य बनायो भने सीमा, लक्षण, परिभाषा बुझ्दै नबुझी देश बाहिरका सबैलाई डायस्पोरिक भन्ने प्रचलन किन बढेको होला भन्दै प्रस्तुत लेख लेख्न बाध्य तुल्यायो ।
त्यसो त नेपालमा डायस्पोरा सम्बन्धि विशेष कलम चलाउने दुई जना विव्दान डा. गोविन्दराज भट्टराई तथा डा. खगेन्द्र लुईटेललाई एकापसमा सहकार्य गरेर यस्तो विषयमा टुँगो लगाउन व्यक्तिगत तवरमा मैले प्रयास नगरेको होईन । अझ दुबैजनालाई एउटै टेलिफोनमार्फत खसखस डट कमकोलागी यस विषयमा कुराकानी गरौँ भनेर अनुरोधपनि गरेको हुँ । तर वहाँहरुको एकापसमा मत भिन्नताको कारण मैले अलग अलग कुराकानी गर्नुपर्यो । तर प्रसार गर्दाभने दुबै अडियो एकै पेजमा राखेर प्रसार गरेँ ।
अर्काे कुरा, विदेशमा बस्नेहरुले आफ्नो पहिचानकोलागी आफुलाई डायस्पोरिक भनियोस् भन्ने चाहना राख्नेहरुकोपनि भीड बढ्दो छ । तर मलाई के लाग्छ भने साहित्यकारको कर्म नितान्त साहित्य साधनामा लाग्नु हो । आफुलाई यो भनियोस् या त्यो भनियोस् भनेर चाहना राख्नु लालसीको लक्षण देखाउनु हो । यसबारेमा मूल देशका समालोचक तथा समीक्षकहरुले जे भन्नुपर्ने हो भनिहाल्छन् भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । किनभने यो काम उनिहरुको हो । तर यहाँ उल्टो भएको छ । विदेशकाहरुले हामीलाई डायस्पोरिक हो भनिदेउ भनेर कार्यपत्र लेखाउँछन । अनि डायस्पोराको नामबाट घरदेशभन्दा आफुलाई अलग पहिचान दिन खोजेका छन् । रचना घरदेशकै भाषामा गर्ने तर अलग देखाउन चाहने प्रवृत्ति अलि अमिल्दो भएको हो कि भन्ने स्वतः भान हुन्छ । यहि कारणले यस शब्दमा सबैको सहमति अहिलेसम्म हुन नसकेको हो । तररपनि यस शब्दको प्रयोग भने व्यापक भई रहेको छ ।
अन्तमा यदि डायस्पोरा शब्द प्रयोग नै गर्ने भन्ने हो भनेपनि डायस्पोराको सट्टा सबैलाई सुहाउने, सबैजना अटाउने र प्रष्ट र गहन अर्थ दिने अनि सर्वसम्मतलाई स्विकार्य हुने गरि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो राय रहेको छ । तर पहिले यसलाई सामयिक र सर्वमान्य अनि सुपरिभाषित गरेपछिमात्र यसको प्रयोग गर्न थालाँै भन्ने मेरो आग्रह हो । सबैभन्दा राम्रो त यस्तो शब्दव्दारा कुनै परिधिआदि कायम नगरी जहाँ बसे रहेपनि नेपाली र नेपाली साहित्यकै नामले सम्बोधन गरिए सबैभन्दा बेश होला भन्ने मलाई लाग्छ । यस सम्बन्धि के गर्ने हो विव्दानहरुकै जिम्मा ।
बासुजिले शिलशिला मिलाएर डायस्पोराबारे ड्यासिङ लेख लेख्नु भएको छ् ! \_'डायस्पोरा\_' शब्द नै ड्यासिङ भएकोले मुङ्लाने नेपालीले आफ्नो प्रिथक चिनारी वा पहिचान दिनलाई यो घच्ची शब्दलाई रोजेको होला | नत्रभने प्रवासमा रहेका प्रवासे नेपालीले प्रवासी नेपाली साहित्य भन्दा भै गयो नि ! बित्थाको यो डायस्पोरा र फायस्पोरा किन भनि रहनु ? नेपाली साहित्यको उर्वर भुमी दार्जिलिङ,जुन प्रवासमै छ्, त्यहांका स्रष्टाहरुले प्रवासी नेपाली साहित्य नै भन्दै आएका छन| मेचिपारिका कतिपय साहित्यनुरागीहरुले त अझ त्यो \_'प्रवास\_' समेत नजोडी नेपाली साहित्य नै लेख्छन| बर्मा र आसामका प्रवासेहरुले प्रवासी नेपाली साहित्य नै उच्चारण गर्दै आएका छन| पछिल्लो समयमा \_'गैर आवसिय नेपाली साहित्य\_' जस्तो अत्यन्तै रुखो,अमिल्दो र नमिठो शब्द प्रयोग भैरहेको छ| यस्तो शब्द प्रयोग गर्ने स्रष्टाहरुकै सृस्‍टि कस्तो होला ? साहित्यलाई शब्दहरुको खेलको रुपमा मात्र् लिनुहुन्न|साहित्यबाट रस टप्कनु पर्छ,,,,,,,,,,